Igbo Mass Readings for December 19, 2020, N'Oge Adventi
May 8, 2021 April 21, 2021 by lectionary
Nna, I na-egosi uwa ebube nke otito Gi n’obibia nke Kristi Nwa Gi, Onye a muru site na Virgin Maria. Nye anyi ezi okwukwe na įhunaanya iji mee emume ihe omimi nke Chukwu Nwa emere mmadu. Site na Dinwenu anyį Jesu Kristi …
ihe Ogugu nke mbu
Ihe ogugu ewetara na akwukwo Ndiikpe
Na mgbe ahu, e nweere onye obodo Zora, aha ya bu Manoa. Nwoke ahu bukwa onye agburu Dan. Nwunye ya bu nwaanyi aga. Mana mmuooma Oseburuwa wee biakwute nwaanyi ahu si ya, “I bu nwaanyi aga, na-enweghi nwa. Ma n’oge a, I ga-aturu ime, muo nwa nwoke. Ya mere, lezie anya, ka I ghara inu mmanya oku obula, ma o bu ihe onunu obula na-aba n’anya, ma o bu iri ihe obula ruru aru. Mgbe I mutara nwa nwoke ahu, aguba obula agaghi aga ya n’isi. N’ihi na site n’ubochi a muru ya, a ga-edoro ya Chineke nso ibu onye Nazirait.
O ga-amalitekwa oru inaputa ndi Izrel na-aka ndi Filistia. Nwaanyi ahu wee gaa, gwa di ya si, “Onye nke Chineke biakwutere m. O dika mmuooma Chineke, na-atu egwu. Ajughi m ya ebe o siri bia, O gwaghikwa m aha ya. Mana o gwara m na m ga-aturu ime, muo nwa nwoke. O gwakwara m ka m ghara iñu mmanya oku obula, ma o bu rie ihe obula ruru aru. N’ihi na a ga edoro Chineke nwa ahu nso na ndu ya niile.” Nwaanyi ahu mutara nwa nwoke, kpoo aha ya Samsin. Nwata ahu tolitere. Yahweh gozikwara ya. Mmuo nke Yahweh wee bido ikwalite ike Samsin n’oge o no na-agbata Zora na Eshtaol, n’ebe obibi agburu Dan.
ABUOMA NA AZIZA: Ps 71, 3-4. 5-6.16-17.
AZIZA: Onu m juputara n’otito nke gi ogologo ubochi niile.
Buru okwute nke ngbaba m, mgbidi aja nke ga-azoputa m! n’ihina I bu okwute m, nchedo m, Chineke m, zoputa m n’aka ndi ajo mmadu. Az.l
N’ihi na so gi Onyenweanyi bu nchekwube m,
Onyenweanyi, echekwuberem na gi bido na mgbe m di n’okorobia. Atukwasara m gi obi bido na mgbe a muru
m, I burii oke nke m site n’afo nne m o bu gi ka m na-eto mgbe niile. Az./
Aga m abia n’ike nke Onyenweanyi, wee cheta ikpe nkwumoto gi, sooso nke gi. O Chineke, I kuziiri m bido na nwata m, aga m na-ekwuputa oru ebube gi. Az./
Bia igodo nke Devid, mmeghe onu uzo alaeze gi di ebeebe, mee ka ndi no na mkporo nke ochichiri nwere onwe ha. ALLELUIA.
N’oge eze Herod na-achi ala Judia niile, e nwere otu onye nchuaja aha ya bu Zekaria. O so n’otu ndi ojeozi nke Abija. Onwere nwunye aha ya bu Elizabet, onye si n’agburu Eron, onyeisi nchuaja. Di na nwunye a bu ndi eziomume n’ihu Chineke. Ha na-edobe iwu niile na ukpuru niile nke Onyenweanyi, n’enweghi ntupo. Ma ha amutaghi nwa, n’ihi na Elizabet bu nwaanyi aga. Ya na di ya emekwala agadi. Mgbe Zekaria no na-eje ozi n’ihu Chineke oge ndi otu ya ketara iga ozi, ka usoro omenala ndi nchuaja si di, o manyere Zekaria ibanye ebe nchuaja di n’ulonso nke Chineke kpoo mgbaisioma oku. Oha ndi Juu niile no n’ezi na-ekpe ekpere n’oge aja mgbaisioma ahu. N’ebe ahu ka mmuooma nke Oseburuwa biakwutere ya, guzoro n’aka nri nke ekwuaja mgbaisioma ahu. Mgbe Zekaria huru ya, obi mmapu na ujo jidere ya. Ma mmuooma ahu siri ya, “Atula egwu, Zekaria n’ihi na a nula ekpere gi; Elizabet nwunye gi ga-amutara gi nwa nwoke. I ga-akpokwa ya Jon. I ga-enwe onu na obi uto; Otutu mmadu ga-enwe añuri n’omumu ya; N’ihina o ga-abu onye di ukwu n’ihu Chineke. O gaghi anu mmanya obula Ma bu ihe onunu obula na-egbu egbu. O ga-ejuputakwa na Mmuo Nso o buladi site n’afo nne ya. O ga-eme ka otutu umu Izrel loghachi azu n’ebe Chukwu ha no. O ga-aga ikwadoro Dinwenu uzo. N’udi mmuo na ike nke onye amuma Elaija, ka o ga-eji tugharia obi ndi bu nna n’ebe umu ha no. Meekwa ka ndi isi ike tugharia obi lekwasi anya n’amamihe nke ndi eziomume, bia kwadobere Chineke ndi nke ya.” Zakaria juru Mmuooma ahu si, “Olee otu m ga-esi mata nke a, n’ihi na aghoola m agadi. Nwunye m akakwala nka?” Mmuooma ahu zara ya si, “Abu m Gebrel, onye na-akwu n’ihu Chineke. E zitere m ka m gwa gi okwu ma wetara gi ozioma nke a. Lee, I ga-ada ogbi, I gaghi ekwu okwu ruo ubochi ihe ndi a ga-emezu, n’ihina I kwenyeghi n’okwu m, nke ga-emezu mgbe oge ha ruru.” Ndi mmadu no n’ezi na-eche Zekaria, o gbakwara ha gharii ihe kpatara o ji noo odu iputa n’ikwu ulonso. Mgbe o putara, o nweghi ike igwa ha okwu obula. Ha matara na o huru ohu n’ime ikwu ulonso, o jiri ife aka na-agwa ha okwu n’ihina o buzi onye ogbi. Mgbe ubochi ofufe ya zuru, o lara n’ulo ya. Ka ubochi ndi a gachara, Elizabet nwunye ya tuuru ime. O zoro onwe ya n’ime ulo onwa ise; na-ekwu n’obi ya si, “O bu otu a ka Dinwenu si meere m ihe oma, n’ubochi o ji lee m anya ebere, iwepuru m ihere n’etiti mmadu.”
Dinwenu ebere, nara onyinye anyį na-ebute n’ebe nchu-aja Gi. Mee ka ike nke Gi wepu adighi ike anyi ma dookwa onyinye anyį ndo. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.
Nna, anyi na-enye Gi ekele maka achicha nke ndu. Meghee obi anyi iji ezi mmuo-nnabata na akwado maka objbia nke onye nzoputa, Onye bu Dinwenu ebighi ebi, ebighi ebi. Amen.
Mass Readings for April 21 2021,Wednesday of Third Week of Easter
Mass Readings for April 22 2021,Thursday of Third Week of Easter